DegDeg :Golihii wasiirada cusub Loo Magacaabi Lahaa oo Madaxtoyada Loogu soo Ururiyay iyo dhawaaqida oo la sugayo. – idalenews.com
DegDeg :Golihii wasiirada cusub Loo Magacaabi Lahaa oo Madaxtoyada Loogu soo Ururiyay iyo dhawaaqida oo la sugayo.
Muqdisho:Wararka naga soo gaarayo Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in Goordhaw la filayo in lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada Xukuumada Cusub ee Soomaaliya.
Xarunta Madaxtooyada hada waxaa kasocda qaban qaabo xoogan oo loogu jiro Xaflada lagu Shaacinayo Golaha Wasiirada oo la filayo Shanta galabnimo waxii ka dambeeya in lagu dhawaaqo.
Ilo katirsan Xafiiska Ra’izul Wasaaraha Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in galabta lagu dhawaaqayo Golaha Wasiirada hadana ay Madaxtooyada joogaan inta badan Xubnaha la filayo in ay kamid noqdaan Golaha Wasiirada.
Ra’izul Wasaaraha ayaa lagu soo waramayaa in wax yar kahor uu kulan isarasho iyo war iska qaadis la yeeshay Xubnaha kamidka noqonaya Golaha Wasiirada ee la filayo in saacadao yar kadib uu ku dhawaaqo.
Wasiirada lagu dhawaaqayo waxaa kamid ah Xubno katirsanaa Xukuumadii Kalsoonida Baarlamaanka weysay uu hogaaminayay Ra’izul Wasaare Saacid iyo Xubno kale oo Wasiiro kasoo noqday Dowladihii KMG ee Dalka soo maray.
Qaban qaabada Xaflada lagu Magacaabayo Golaha Wasiirada ayaana hada kasocota Xarunta Madaxtooyada , Wariyayaasha ayaana loo sheegay in ay diyaar ahaadaan Goordhawna looga wici doono Xarunta Madaxtooyada si ay u tabiyaan Magacaabista Golaha Wasiirada.
Wax Badan ka Ogow Arimihii ugu dameeyay ee shirka Baydhabo Janaay& Wafi Ka socdo QM oo Gaarey.